एसइई उत्तीर्णहरुलाई खुसीको खबर ! यी हुन् उत्कृष्ट प्लस टु ... - नयाँपुल अनलाइन डटकम
काठमाडौं/एसईई पछिको गन्तव्य कहाँ हो ? निसन्देह भन्न सकिन्छ, प्लस टु एजुकेसन हो । नेपालका उत्कृष्ट प्लस टु कुनकुन होलान् ? अहिले सबैको चासोको विषय हो यो । एसइई परीक्षामा सफलता पाएका लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुको चिन्ताको कुरा हो यो ।
बजारमा प्लस टु अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको कमि छैन् तर उच्च शिक्षाका निम्ती कुन शैक्षिक संस्था रोज्ने भन्ने कुराले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्यौलमा पारेको हुन्छ । विद्यार्थीलाई राम्रा प्लस टुको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो रिपोर्ट तयार पारिएको हो । यहाँ उल्लेख गरिएका उच्चमाविहरु विद्यार्थीका लागी रिफ्रेन्स् हुने कुरामा हामी ढुक्क छौं । विद्यालयशिक्षाको खुड्किलो मानिने प्लस टु पछि विद्यार्थीको भविश्य निर्धारण हुने भएकाले उपयुक्त शैक्षिक संस्था रोज्न सक्नु विद्यार्थीको चुनौती हो ।
प्लस टु शिक्षामा उल्लेखनिय योगदान पु-याएका र निरन्तर उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम ल्याएका प्लस टु यसमा समावेश छन् । शैक्षिक गुणस्तरका निम्ती कुनै सम्झौता नगरि प्रतिस्पर्धारत प्लस टुहरुका बीचमा हामीले उत्कृष्ट २० प्लस टु छनौट गरेका छौं ।
उच्च भौतिक पुर्वाधार, उत्कृष्ट प्रयोगशाला, अध्ययन मैत्री वातावरण, अब्बल शैक्षिक जनशक्ती, विद्यार्थीका निम्ती पारिवारिक वातावरण जस्ता कुरालाई मापदन्ड बनाएर यि २० उमावि छनौट गरिएको हो । प्लस टु अध्ययन पश्चात ति शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धी पनि महत्वपुर्ण मापदन्डको रुपमा लिइएको छ । धेरै विद्यार्थी लिएर पनि तिनको शैक्षिक एवं सर्वाङ्गिण विकासमा उत्तिकै ध्यानदिने यि प्लस टु शिक्षालयले विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गन्तव्यमा पु-याउन प्रमुख भुमिका खेल्ने छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा उल्लेखित कलेजहरु सक्षम नागरिक उत्पादनमा अहोरात्र सक्रिय छन् ।प्रस्तुत छ, उत्कृष्ठ उच्च माविहरु:
१,अरनिको इन्टरनेशनल कलेज
अरनीको इन्टरनेशनल कलेज नेपाली शिक्षामा अत्यन्तै गुणस्तर कायम राखेको उत्कष्ठ बिद्यालय हो । सन् २०१० मा स्थापना भएको हो, अरनिको इन्टरनेशनल एकेडेमी । ललितपुर, सातदोबाटोस्थित ताल्छिखेलमा रहेको यस कलेजले विश्व बजारले माग गर्ने दक्ष जनशक्ति अनुरुप पठन विधी अपनाएको छ । उक्त कलेज सँग विद्यार्थीहरुको विकासको लागि आवश्यक पर्याप्त भौतीक पुर्वाधार रहेको छ ।
२,क्यास्पियन भ्याली कलेज
क्यास्पियन भ्याली कलेज ललितपुर जिल्लाको पूर्णचण्डीमा अवस्थित एक कलेज हो । यसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएको छ । क्यास्पियन भयाली कलेज सन् १९९८ मा स्थापना भएको हो। | उक्त कलेजले अहिले कक्षा ११ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी विषयको पढ़ाड़ सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसबाहेक स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइ पनि चलाइरहेको छ । यस कलेजमा एसएलसीमा बोर्ड फस्र्ट भएका चार जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेका छन्। उनीहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भइसकेका छन्। यस हिसाबले पनि क्यास्पियन भ्याली कलेज कलेज उत्कृष्टहरूको रोजाइ हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अनुभवी शिक्षक उत्कृष्ट भौतिक संरचना तथा विद्ध्थीका लागि आवश्यक पर्याप्त शैक्षिक वातावरणको उपजले यस्तो भएको हो।
३,कोलम्बस कलेज, नयाँ बानेश्वर
कोलम्बस कलेज काठमाडौं जिल्लामा रहेको एक क्याम्पस हो । सम्बन्धनः चाटर्ड ग्लोबल म्यानेजमेन्ट एकाउण्टेन्ट (सिजीएमए)
के तपाई एमबिएस, बिबिएस, बिबिएम र बिबिए पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? या त यी सबै सबै विषय एउटै ठाउँमा पढ्ने कलेजको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईको त्यसको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको उत्कृष्ठ कलेज हो एभरेष्ट कलेज ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त एभरेष्ट कलेजमा विभिन्न विषयमा पढाई भईरहेको छ । ३५ जनाको लागि एमबिएस प्रोग्राम सञ्चालन भईरहेको छ । बिबिएस चार वर्षे कार्यक्रममा ८० सिट राखिएको छ । बिबिएमको लागि ८८ जनाको कोटा रहेको छ । त्यस्तै बिबिएमा ६४ सिट रहेको छ ।
५,ग्लोबल कलेज, अफ म्यानेजमेन्ट मध्यबानेश्वर, काठमाडौँ
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : १ लाख २९ हजार
हरेक वर्षको परीक्षामा उत्कृष्ठ संख्यामा विद्यार्थी पास गराउन सफल रहेको यो कलेजले मासिक शुल्क ५ हजार लिन्छ । भर्ना शुल्क १२ हजार र अन्य शुल्क ५७ हजार लिने गरेको कलेजले जनाएको छ । जम्मा एक वर्षका लागि यो कलेजले १ लाख २९ हजार रुपैया लिने गर्छ ।
शिक्षकलाई वक्ता र विद्यार्थीलाई श्रोताका रूपमा होइन, दुवैको सहकार्यबाट मात्रै गुणस्तरीय पढाइ सम्भव छ भन्ने मान्यतामा आधारति छन्, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट उच्च माविका शिक्षण क्रियाकलाप। त्यसैले यहाँ प्रयोगात्मक शैक्षिक विधिलाई प्रमुख रूपमा अपनाउने गरिएको छ। यस कलेजमा विद्यार्थीलाई किताबी कीरो मात्रै होइन, अतीरीक्त ज्ञान र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि खरो उत्रिन अभिमुखीकरण गरिन्छ।
६,काठमाडौं मोडल कलेज
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : १ लाख १३ हजार ९ सय
बागबजार काठमाडौं अवस्थित अर्को प्लस टु हो काठमाडौं मोडल कलेज । गत वर्षको नतिजाअनुसार ९५.३६ प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन सफल भएको यो विद्यालय विद्यार्थीहरुको अर्को छनोट बन्न सक्छ । यो प्लस टु ले विज्ञान र ब्यवस्थापन विषय अध्ययन गराउँदैं आएको छ ।
विज्ञानतर्फ मासिक शुल्क ५ हजार २ सय लिने यो प्लस टुले भर्ना वापत ८ हजार तथा अन्य शुल्क बापत ४३,५०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । कुल एक वर्षको खर्च निकाल्दा विज्ञानतर्फका विद्यार्थीले १ लाख १३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । विज्ञानतर्फ ७०० विद्यार्थी भर्ना लिदैं आएको यो प्लस टुले १ सय जनालाई छात्रवृति दिने गरेको जनाएको छ ।
यस्तै ब्यवस्थापनतर्फ ४ सय विद्यार्थी भर्ना लिने केएमसीले ८० विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने गरेको छ । ब्यवस्थापनतर्फ ३ हजार ५ सय मासिक शुल्क लिने यो प्लस टुले भर्ना शुल्क भने ८ हजार लिन्छ । अन्य शुल्क २४ हजार ५ सय लिने गरेको छ । सबै गरी एक वर्षमा एक कलेजमा पढ्न ७४ हजार ५ सय तिनुपर्ने हुन्छ ।
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ९६ हजार
हात्तीबन ललितपुरमा रहेको लिटिल एन्जल्स पनि गनिएको प्लस टुमा पर्छ । यसले ब्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा अध्यापन गराउँदैं आएको छ ।
विज्ञानतर्फ ३५० जना भर्ना लिने यो उच्च माविले ब्यवस्थापनतर्फ २५० जना विद्यार्थी भर्ना लिन्छ । यसले विज्ञानतर्फ ३५ जना र ब्यवस्थापनतर्फ २५ जनालाई छात्रवृति दिने गरेको जनाएको छ ।
लिटिल एन्जल्सले विज्ञान र ब्यवस्थापन दुवै संकायमा मासिक शुल्क ५ हजार, भर्ना शुल्क १४ हजार र अन्य शुल्क स्वरुप २४ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस उच्च माविमा एक वर्ष अध्ययन गर्न ९६ हजार स्कुल तिनुपर्ने हुन्छ ।
८. प्रसादी एकेडेमी
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ९०५५०
रिजल्ट हिसाबले उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेको मानिएको यो प्लटु ललितपुरको मानभवनमा रहेको छ । गत वर्षको नतिजामा यसले ९८.३५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई उतीर्ण गरेको यो कलेजले विज्ञान तथा ब्यवस्थापन संकायमा पढाइ गराउँदैं आएको छ ।
विज्ञानतर्फ मासिक शुल्क ४५५० लिने यो उच्च माविले भर्ना शुल्क १४९५० र अन्य शुल्क २१ हजार लिने गरेको छ । सबै वार्षिक रुपमा जोडदा यसको कुल शुल्क एक वर्षमा ९०,५५० हुन आउँछ । विज्ञानतर्फ ४०० विद्यार्थी पढाउने यसले ४० विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने गरेको छ ।
प्रसादीले विज्ञानसँगसँगै ब्यवस्थापन पनि पढाउँदैं आएको छ । ब्यवस्थापनतर्फ यसले मासिक शुल्क ३५५० लिदैं आएको छ भने भर्ना शुल्क १४९५० रहेको छ । ब्यवस्थापनका लागि अन्य शुल्क १४००० लिने गरेको छ । यो सबै जोड्दा कुल ७१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ एक वर्षको खर्च हुन आउँछ । ब्यवस्थापनमा २८० विद्यार्थी पढाउँदैं आएको यो कलेजले १४ जनालाई छात्रवृति दिने गरेको छ ।
९. सेन्ट मेरिज उच्च मावि
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ८४ हजार ८ सय
जावलाखेल लतिपुरमा रहेको यो उच्च माविले छात्राहरुलाई मात्र भर्ना लिने गरेको छ । विज्ञान, मानविकी र ब्यवस्थापन तीनै संकायमा अध्यापन गराइने यो कलेज पनि राजधानीका उत्कृष्ट उच्च माविहरु मध्येमा पर्छ ।
गत वर्ष ९६.१८ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई उतीर्ण गराउन सफल यो उच्च मावि राजधानीको कहलिएको उच्च माविमा पर्छ ।
विज्ञानतर्फ ८० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिने यसले १५ जनालाई छात्रवृति दिने गरेको छ । यस्तै मानविकीमा ३० जना भर्ना लिने गरेको यसले ७ जनालाई छात्रवृति दिन्छ भने ब्यवस्थापनमा ८० जनाको सिट रहेकोमा १५ जनाले छात्रवृति पाउने गरेका छन् ।
कलेजले तीनैं संकायका लागि समान शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मासिक शुल्क २९ सय, भर्ना शुल्क २० हजार र अन्य शुल्क ३० हजार रहेको छ । कुल गरी वर्षमा ८४ हजार ८ सय हुन आउँछ ।
१०. सेन्ट जेभियर्स
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ७५ हजार
पढाइका लागि कहलिएको मानिएको सेन्ट जेभियर्स कलेज काठमाडौंको माइतीघरमा अवस्थित छ । विज्ञानमात्र पढाउने यो कलेजले प्रत्येक वर्ष ५ सय ५० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गरेको छ । गत वर्ष ९८.०७ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण गर्न सफल यो कलेजमा भर्नाका लागि नै तछाड मछाड हुने गरेको छ ।
कलेजले मासिक स्कुल नलिई दुई किस्तामा विद्यार्थीबाट स्कुल लिने गरेको छ । जसमा भर्ना शुल्क ५ हजार र अन्य शुल्क ७०, हजार गरी एक वर्षमा ७५ हजारमा पढाउँदैं आएको छ । यसले विज्ञानमा भर्ना लिदा बायोलोजी र फिजिक्स समूहमा छुट्टाछुट्टै भर्ना लिने गरेको छ ।
११. एनसीसीएस उच्च मावि
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ६२ हजार ७ सय
काठमाडौंको पकनाजोलमा रहेको यो उच्च माविले ब्यवस्थापन संकायमा मात्र अध्यापन गराउँदैं आएको छ । एक शैक्षिक सत्रमा ५ सय विद्यार्थी भर्ना लिने यो उच्च माविले २५ जनालाई छात्रवृति उपलब्ध गराउँदैं आएको छ ।
मासिक शुल्क ३ हजार १ सय, भर्ना शुल्क ३ हजार र अन्य शुल्क २२ हजार ५ सय लिने यो कलेजमा एक वर्ष अध्ययन पूरा गर्नका लागि ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१२. सिद्धार्थ वनस्थली इन्च्युट
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्कः विज्ञानतर्फ ५६ हजार
ब्यवस्थापनतर्फ ३९ हजार
पब्लिक ट्रष्टबाट सञ्चालित सिद्धार्थ बनस्थली इन्च्युटले पनि राजधानीका प्रसिद्ध प्लस टु पढाउने शैक्षिक संस्थामध्येमा पर्छ । बालाजुस्थित यो कलेजले साइन्स र म्यानेजमेण्ट पढाउँदैं आएको छ ।
साइन्सतर्फ फिजिक्स र बायोलोजी गरी दुई समूहमा भर्ना लिने यो कलेजले भर्नाका लागि २० हजार रुपैयाँ र मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । विज्ञानतर्फ ११ कक्षाको पढाइ पूरा गर्न ५६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
ब्यवस्थापनतर्फ भर्ना शुल्क १५ हजार र मासिक शुल्क भने २ हजार रहेको छ । ब्यवस्थापनमा ११ कक्षा पूरा गर्न ३९ हजार तिनुपर्छ । भर्ना र मासिक बाहेक सिद्धार्थ बनस्थलीको अन्य शुल्क यसमा समावेस छैन ।
१३. मोर्डन बोर्डिड स्कुल
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : ४३ हजार ५ सय
दधिकोट भक्तपुरमा रहेको मोर्डन स्कुलले पनि ब्यवस्थापन संकायमा मात्र अध्यापन गराउँदैं आएको छ । एक शैक्षिक सत्रमा ३५० जना विद्यार्थी भर्ना लिने यो उच्च माविले २४ जनालाई छात्रवृति दिने गरेको छ ।
मासिक शुल्क २४ सय, भर्ना शुल्क ७ हजार र अन्य शुल्क ७ हजार ७ सय लिने यो उच्च माविमा एक वर्ष पढ्नका लागि ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. सैनिक आवासीय महाविद्यालय
कक्षा ११ मा पूरा गर्न लाग्ने शुल्क : विज्ञान १ लाख २९ हजार ६ सय विज्ञान
ब्यवस्थापन : १ लाख २६ हजार ८ सय
भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको यो उच्च मावि नेपाली सेनाको सञ्चालनमा चलिरहेको छ । तर, विज्ञातर्फ यसले अरु अब्बल कलेजहरुलाई शुल्कमा उछिनेको छ । यसले विज्ञान, ब्यवस्थापन र मानविकी तीनै संकायमा अध्यापन गराउँदैं आइरहेको छ ।
विज्ञान र ब्यवस्थापनमा समान १ सय ६० जना विद्यार्थी भर्ना लिने यसले समान ८ ८ जनालाई छात्रवृति दिने गरेको छ । मानविकीमा भने यसले ४० जनालाई भर्ना लिदैं आएको छ । जसमा २ जनालाई छात्रवृति दिइन्छ ।
भर्ना शुल्क ६ हजार र मासिक शुल्क ९ हजार ५ सय लिने यो उच्चमाविले अन्य शुल्क बापत मानविकी र ब्यवस्थापनमा ६ हजार ८ सय र विज्ञानमा ९ हजार ६ सय लिदैं आएको छ । यसरी हेर्दा मानविकी र ब्यवस्थाप पढ्नेले वर्षमा १ लाख २६ हजार ८ सय रुपैयाँ तिनुपर्छ भने विज्ञान संकायमा पढ्नेले १ लाख २९ हजार ६ सयमा कक्षा ११ पूरा गर्छ ।
१५,एट्लान्टिक इन्टरनेसनल कलेज, ठमेल
१६, आर्यन स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट, मध्यबानेश्वर, काठमाडौं
यो कलेजमा बिई सिभिल इन्जिनियर, बिआईटी (ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी), बिसिए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) र बिबिए (ब्याच्लर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रिसन) पढाई हुने गर्दछ।
१७, क्वेस्ट इन्टरनेसनल कलेज, ग्वार्को ललितपुर
१८, मेधावी कलेज शंखमुल नयाँ बानेश्वर काठमाडौं
१९,पाटन कलेज, कुपुन्डोल ललितपुर
२१,आइएसटी कलेज, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं
२२,मोडर्न नेपाल कलेज, सोह्रखुट्टे काठमाडौं
२३,नर्भिक बिजनेश स्कुल,हात्तीसार काठमाडौं
२४,हेराल्ड कलेज, बिशालनगर काठमाडौं
२५,नेसनल कलेज, बालुवाटार काठमाडौं
२६,डिएभी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, भनिमण्डल ललितपुर
२७,किस्ट कलेज, कमलपोखरी
२८,टेक्सास इन्टरनेश्नल कलेज, मित्रपार्क
२९,अर्किड इन्टरनेसनल कलेज, गौशला
३०,लर्ड बुद्ध एडुकेसन फाउण्डेसन, मैतीदेवी
३१,इस्लिङ्टन कलेज, कमलपोखरी
काठमाडौंकोनयाँबानेश्वरमा अवस्थित यो कलेजमा पोखरा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु संचालन भइ रहेको छ। यस कलेजले बिबिए, बिबिएबिआई, एमबिए, एमबिए फाइनान्स अध्यापन गराइरहेको छ। जसको शुल्क र कार्यक्रम निम्नानुसार छन्ः
३३,के एण्ड के कलेज, नयाँ बानेश्वर
३४,एपेक्स कलेज, मध्य बानेश्वर
३५,नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज, पाङकजोल, काठमाडौं
३६, थेम्स कलेज, बत्तिस पुतली
३७, द ब्रिटिस्ट कलेज,थापाथली
३८,प्रसादी एकेडेमी उच्च मावि, मानभवन, ललितपुर
विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि न भौतिक-मानसिक दबाब दिइन्छ, न उपदेश नै। विद्यालय छिर्नेबित्तिकै उनीहरूलाई पढाइप्रति स्वत: उत्पे्ररति गर्न अभिमुखीकरण गरिन्छ। त्यस क्रममा पढेर के हुन्छ, किन पढ्नुपर्छ भन्नेबारे बताइन्छ। “विद्यार्थीलाई पढ भनेर कहिल्यै उपदेश दिँदैनौँ। पढेर के हुन्छ भनेर मात्रै बताइदिन्छौँ,” प्रसादी एकेडेमीका प्राचार्य कृष्णमंगल जोशी भन्छन्। शिक्षकले एक भरपर्दो मार्गदर्शक र साथीको भूमिका निर्वाह गरििदए पुग्ने उनको भनाइ छ।
४०,सेन्टमेरिज उच्च मावि, जावलाखेल, ललितपुर
४१, काठमाडौँ मोडल उच्च मावि, बागबजार, काठमाडौँ
४२,मेरिल्यान्ड उच्च मावि, विराटनगर, मोरङ
४३,युनाइटेड एकेडेमी उच्च मावि, कुमारीपाटी, ललितपुर
‘अनुशासन र स्तरीय शिक्षा !’ युनाइटेड एकेडेमीको बटमलाइन हो यो र यही नै हो पहिचान पनि। शिक्षकले नियमित गृहकार्य दिन्छन्। विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा गृहकार्य गर्नुपर्छ र नोटबुक बनाउनुपर्छ। प्रत्येक विषयका अलग्गै विभाग छन्। विभागीय सदस्यहरूले सामूहिक छलफलबाट सूक्ष्म तालिका बनाएका छन्, जसमा विषयवस्तु, शिक्षण विधि र समयका बारेमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यसै आधारमा शिक्षकले पनि पूर्ण तयारीका साथ कक्षामा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
४४,नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज -निस्ट), लैनचौर, काठमाडौँ
४५, सगरमाथा उच्च मावि, पोखरा
४६,कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिज उच्च मावि -कोबास), विराटनगर, मोरङ
साढे ११ कट्ठा जग्गा लामो समयका लागि भाडामा लिएर आफ्नै चारवटा भवन बनाएको कोबासमा नयाँ शिक्षक भर्नाका लागि विषयगत विभाग प्रमुखलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ। कोइरालाका अनुसार पारविारकि वातावरणजस्तै शिक्षक र विद्यार्थीबीच खुलेर छलफल गरिन्छ। विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विषयबारे निर्धक्कसँग बुझ्न पाउने अवसर प्रदान गरिन्छ। नियमितबाहेक अतिरत्तिm कक्षा नि:शुल्क रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। ‘स्मार्ट कक्षा’ पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ, जस अनुसार ४० जना विद्यार्थीलाई एकसाथ राखेर कम्प्युटर प्रविधिबाट अध्यापन गराइन्छ। त्यसैले कोबासमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीले पढाइप्रति सधैँ उत्तिकै उत्साह र जाँगर देखाउने गरेको कोइरालाको भनाइ छ।
४७,लिटिल एन्जल्स उच्च मावि, हात्तीवन, ललितपुर
यी हुन अन्य उत्कष्ठ कलेज:
हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज,
काठमाडौं बर्नहार्ट कलेज,
द न्यु समिट कलेज,
जनप्रतिनिधिको आगमन संगै समृद्ध बन्दै भोजपुर नगरपालिका